Android TV Box tsara indrindra (2020) - Tsy maintsy vakiana (hevitra) - Fialam-Boly
Android TV Box tsara indrindra 2020 - Tsy maintsy vakiana (hevitra)
Android TV box dia sehatra fialamboly TV izay miorina amin'ny Android ary tantanan'i Google. Betsaka ny zavatra lehibe azonao atao amin'ny Android TV Box. Raha ny marina dia tsy voafetra fotsiny ny fahafaha-manao.Betsaka ny boaty napetraka avy amin'i Xiaomi, NVIDIA, ary maro hafa. Saingy, tena sarotra ny manasokajy ny tsara amin'ny ratsy.
Misy boaty fahitalavitra Android toy ny Nexus Player sy Razer Forge TV.Ny hafa, toa ny Sharp AN-NP40 sy CCC Air Stick, dia tsy misy any Etazonia.Izany no antony nitanisanay ireo boaty TV Android tsara indrindra sy Android TV izay misy eny an-tsena izao.
Ny Android TV dia mamela anao handefa atiny mora amin'ny fahitalavitra, ary ahafahanao misintona fampiharana avy amin'ny Google Playstore.Raha mitady Android TV Box ianao izay mahavariana sy azo vidiana fotsiny, dia tonga amin'ny toerana mety.
Box Android TV tsara indrindra:
Ny NVIDIA Shield TV dia heverina ho iray amin'ireo boaty TV Android tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny.Izy io dia manana fiasa toa ny fidirana amin'ny Google Play Store ary manohana ny Google Assistant amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra miaraka amin'ny mikrophone. Izy io koa dia manana NVIDIA GameStream, izay ahafahanao mandefa lalao amin'ny PC miaraka amin'ny karatra sary GeForce GTX mifanentana sy GeForce IZAO.
Any Shina, ny NVIDIA Shield TV dia manana endrika mahavariana hafa: ny lalao GameCube sy Wii avy amin'ny Nintendo.Ireo tompona fahitalavitra Shield ao Shina koa dia mahazo fidirana amin'ny New Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, ary lalao maro hafa.
Vitsy dia vitsy ny boaty TV Android misy fanaraha-maso lavitra IR izay afaka manitsy ny volan'ny fahitalavitrao ary mamelona sy mamono ary iray amin'izany ny NVIDIA. ahoRaha misintona sy mametraka ny Shield TV manokana an'ny Plex ianao, ny Shield TV dia lasa mpizara haino aman-jery feno asongadiny izay mety ilaina amin'ny fitadiavana, fisarihana, fandaminana ary fandefasana sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary mozika avy amin'ny Internet.
Shield Stand (mitsangana mijoro)
NVIDIA GeForce izao
Lalao Nintendo GameCube sy Wii any Shina
Avadiho ho TV Box mahatalanjona ny fahitalavitrao miaraka amina fiainana miavaka sy milamina amin'ny fahitana sary mazava tsara.Misy fotsiny ny fialamboly tsy voafetra miaraka amin'ny atiny mahatalanjona an-tserasera miaraka amin'ny fantsom-pahitalanao.
Fikarohana am-peo - Azonao atao ny milaza azy io hikarohana azy io
Kalitaon'ny sary 4K
Ampiasao ny smartphone-nao ho lavitra hifehezana ny fitaovana
Mizotra mivantana amin'ny fahitalavitrao Avy amin'ny telefaona findainao
azonao atao ny mahazo fidirana amin'ireo Apps mihoatra ny 5000 Miaraka amin'ny Play Store Android TV
Afaka mifandray amin'ny tontolon'ny atiny sy fialam-boly ao an-trano amin'ity Box Box mahavariana ity ianao. Mandeha amin'ny Android TV 8.1 farany izy io. Mora be ny mampiasa azy io, manohana ny fanaraha-maso ny feo sy ireo fampiharana tianao indrindra toa ny Netflix, YouTube, SlingTV, ary maro hafa!
Afaka miaina sary 4K HDR mahafinaritra ianao. Jereo ny fandaharana amin'ny fahita lavitra amin'ny TV, milalao lalao na mijery vaovao na mihaino mozika.Mi Box koa dia manoro hevitra anao ny horonan-tsary mifototra amin'ny zavatra tianao manokana amin'ny alàlan'ny YouTube.
Izy io dia manana endrika fanaraha-maso ny Feony: miaraka amin'ny Google Assistant sy amin'ny fikarohana feo ao amin'ny Apps. Mikaroha sary na zahao ny toetrandro na asio fanairana. Ny zava-drehetra dia amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fotsiny.
Izy io dia miaraka amin'ny Android 8.1: Ankafizo ny tsimbadika farany amin'ny Android TV 9.0 azo ampiharina aorian'ny fanavaozana azy, tonga lafatra fotsiny ho an'ny fialamboly an-trano, teatra an-trano sy maro hafa
Amazon Prime Video dia azo lalaovina aorian'ny fanavaozana ny Android 9.0. Azonao atao ny manavao azy amin'ny alàlan'ny safidy fanavaozana ny lozisialy rehefa vita ny fametrahana azy.
High Clarity 4K HDR: vahaolana 4K Ultra HD sy High Dynamic Range (HDR)
Afaka miditra amin'ny votoaty marobe ianao: fidirana amin'ny fantsona sy fampiharana mihoatra ny 3000+, afaka mankafy horonan-tsary sy fizarana amin'ny fahitalavitra avy amin'ny Netflix, YouTube, ary maro hafa
Izy io dia manana Capacity fitehirizana avo dia avo: manome fandikana haingana sy maharitra mba hankafizanao traikefa video avo lenta ao an-trano amin'ity Android Box Box ity.
Amin'ity TV Box ity dia tsy misy antsipiriany iray akory tsy ho hitanao raha ao amin'ny 4K ultra HD ny sarimihetsika sy ny lalao ataonao. Ity fitaovana ity dia manana ny fandidiana OS vaovao Android 9: Ity boaty fahitalavitra mahira-tsaina ity dia mampiasa ny rafitra fiasan'ny kinova Android 9. Ny asany dia malama sy haingana kokoa.
Miomàna hanombohana ny fitsangatsanganana ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao na sarimihetsika amin'ny alàlan'ny fampiharana streaming maromaro tonga amin'ny boaty TV na misy amin'ny alàlan'ny fivarotana app.Seranan-tsambo USB roa azo ampifandraisina amin'ny totozy sy ny kitendry hanampy anao hiasa mora kokoa.Izy io dia manana safidy fanaraha-maso lavitra izay ahafahanao mankafy ny traikefa.
Ampidiro ny endri-javatra:
OS Android 9.0 miaraka amin'ny WiFi & Bluetooth
Smart Wifi Miaraka amin'ny fitaratra fitaratra
Manolotra fiantohana 1 volana fanoloana amin'ny Projectors Smart TV BOX
Zavatra azonao atao amin'ny Android Tv Boxes:
Afaka mivezivezy, mijery sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, ary horonan-tsary ianao -Android TV Box dia manana ny zavatra ilainao rehetra ary fitaovana tonga lafatra amin'ny fifehezana ny Home Media Center anao. Afaka mora foana ianao Mampandeha horonan-tsary amin'ny Youtube maimaim-poana na mankafy fotsiny Amazon Prime Videos ary koa Famandrihana Hulu Serivisy amin'ny efijery lehibe. Betsaka ny serivisy vidéo maimaimpoana sy maimaim-poana amin'ny Internet. Ny fantsona maimaim-poana dia misy Crackle, Sports Illustrated, Tubi TV, NewsOn, PBS, PBS Kids, PopcornFlix, Twitch.
Milalaova lalao, lalao retro, ary streaming mivantana -Raha mpidoroka lalao ianao na tianao ny milalao lalao indraindray mamela ny ati-dohanao hiala sasatra dia afaka manana lalao an-tapitrisany maro ao amin'ny Google Play Store ianao. Ny ankamaroan'ny gamer dia tia mampiasa Android TV Box (ATVB) mba hilalao kilalao taloha amin'ny konsole taloha toa ny Super NES, Neo Geo, Megadrive, Gameboy Advance, Gameboy, NEC PC Engine sns. Mety ho azo atao ihany koa ny Retro Gaming amin'ny Emulator ho an'ny Android. Miaraka amin'ny ATVB dia azonao atao koa ny mandefa ny Lalao avy amin'ny PC mankany amin'ny fahitalavitrao. Manana fomba maro ianao amin'ny filalaovana azy ireo amin'ity karazana fitaovana ity.
Mampiasà fampiharana mihoatra ny +3,5 tapitrisa izay hita ao amin'ny Play Store -Miaraka amin'ny fampiharana 3,5 tapitrisa mahery hita ao amin'ny Google Play Store, ATVB (Android TV Box) dia ahafahanao mankafy fampiharana an-tapitrisany. Ny zavatra tsara indrindra dia, ny Applications rehetra ampiasainao amin'ny Smartphone na ny Tablet-nao dia eto amin'ny fahitalavitrao izao. Hahita zava-baovao hatao isan'andro isan'andro foana ianao satria be dia be ny fampiharana vaovao ampiana isan'andro.
Kinova nohavaozina amin'ny Netbook -Raha vao nipoitra ny Netbook dia tsy dia malaza loatra izany. Nahazo iray aho ary nahafinaritra tokoa ny nanandrana nanao ny zavatra rehetra tadiavinao an-tserasera toy ny fiantsenana an-tserasera na fanitsiana Office Documents amin'ny Android TV Box. Mamela anao hanao izany sy ny maro hafa.
Jereo ny media sosialy -Mampiasa media sosialy amin'ny telefaona daholo isika rehetra. Tsara tokoa ny fampiasana Media sosialy amin'ny smartphone, fa ny fitetezana Facebook, Instagram, ary ny feed amin'ny Big Screen dia zavatra tena ho tianao. Android TV Box mamela anao hanao izany.
Fitaratra lamba -Screen Mirroring dia Function iray ahafahanao mandefa fampahalalana vitsivitsy anananao amin'ny Smartphone na Tablet Screen anao amin'ny fitaovana hafa, toy ny fahitalavitrao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana Apps amin'ny ATVB, avy eo azonao atao ny mampandeha ity asa ity amin'ny findainao. Izy io dia miasa amin'ny iPhone, iPad, Smartphone Android, ary Tablet ary koa ny PC na Mac anao. Azonao atao ny mizara horonan-tsary, sary, lalao, antontan-taratasy, sns. Afaka mizara zavatra mora foana amin'ny fianakavianao sy ny namanao amin'ny fahitalavitrao ianao.
Video Conference -Betsaka ny zavatra mahafinaritra hafa azonao atao amin'ny Android TV Box (ATVB) ary iray amin'izany ny Video Conference. Eritrereto, misy hetsika na fiasa lehibe ao amin'ny fianakavianao ary ny vadinao dia manao dia lavitra amin'ny raharaham-barotra lavitra ny tranony. Saingy, tianao ihany koa izy afaka mizara ity fotoana sarobidy ity amin'ny sisa amin'ny fianakaviana. Inona no azonao atao amin'izay? Tsotra ihany ny valiny. Konferansa amin'ny horonan-tsary. Ny sisa ataonao dia mametaha fakan-tsary sy mikrô amin'ny Android TV Box (ATVB) avy eo apetraho ny App toa ny Skype, dia vita ianao. Afaka mankafy an'ity hetsika tsy hay hadinoina ity ianao miaraka amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana.
Miaraka amin'ny Android TV, afaka mora foana ianao mandeha mora amin'ny findainao ; na YouTube io na amin'ny Internet, afaka mijery izay tianao ianao. Android TV box mamela anao hampihatra ny Google Play Store izay afaka manampy anao misintona fampiharana sy serivisy hafa toa an'i Netflix na Hulu . Mamela anao mihitsy aza misintona lalao amin'ny fahitalavitrao. Tena ilaina io. Azonao atao ny mividy sy mahita ny fomba fiasany!
Nofoanana tao amin'ny Cinemax ny vanim-potoana faha-5 Banshee?
mijery sy mandefa sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana
minecraft maimaim-poana voasakana ao an-tsekoly
ny fomba handresena xbox 360 maimaim-poana
fampiharana tsara ho an'ny fahitalavitra mahira-tsaina